Top 5 Windows DVD Onye kere Alternatives
Ị ka bụ nnọọ nkọ na-eji Windows OS na Windows DVD Onye kere ọkụ a DVD. Na Windows Vista na Windows 7, Windows DVD Onye kere dị ibudata, wụnye na-agba ọsọ n'ihi na-ere ọkụ a DVD na mgbasa ozi faịlụ mkpa ka ị apa ọkụ. Ma e nwere ọtụtụ ma ọ bụrụ na-agaghị emeli na Windows DVD Onye kere ruru ka dị iche iche mfịna mbipụta na ndakọrịta ka media usoro. N'ụzọ ọzọ, Windows 8 / 8.1 enwereghị Windows DVD Onye kere, ọtụtụ ndị na ọkọdọ rapaara ebe a ghara nwere yiri ngwa uzo ozo ndabara. Ya mere, ebe a na anyị emewo ka collection nke 5 top uzo ozo ka Windows DVD Onye kere ha na-akwado OS, download njikọ na uru n'elu Windows DVD kere ya. Ị nwere ike mfe ime ka gị na DVD-ere ọkụ mfe na-eji ire ụtọ site na iji ihe ọ bụla Windows DVD Onye kere uzo ozo si n'okpuru ndepụta.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ a multipurpose ngwa nwere tọghata gị video faịlụ na kwa ọkụ DVD. O nwere ike ịbụ ndị kacha ngwọta nke Windows DVD Onye kere ruru ya dị iche iche faịlụ formats ndakọrịta. Ọ nwetara ọhụrụ version ka dakọtara na ndị kasị emelitere os. The ego akụkụ nke a DVD-ere ọkụ software bụ video Ntụgharị. Ọ na-akwado ọtụtụ faịlụ formats na ike tọghata ha n'etiti na-eche na ị free iji ha dị ka chọrọ. Gịnị mere ọ pụrụ ịbụ ihe ọzọ na-Windows DVD Maker-
Wondershare DVD Onye kere Comparison:
Wondershare DVD Creator Bụ otu n'ime ọtụtụ ịrịba DVD burner ngwa mgbe na nwetara kasị Hits na download ma na-ọtụtụ reviews na a mma n'ụzọ. O nwere ike ịbụ na kwesịrị nọchiri na ọbụna ndị kasị mma ọzọ ka na-ewu ewu DVD ọkụ software, Windows DVD kere ya. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke OS si Windows na Mac. Ị nwere ike nweta ihe ndị kasị faịlụ format ndakọrịta ka ọkụ gị DVD. Gịnị mere ọ pụrụ ịbụ ihe ọzọ na-Windows DVD kere ya.
Ọkụ DVD discs na ihe karịrị 150 faịlụ formats nke mgbasa ozi faịlụ.
Ọ nwere ike na ọkụ superfast na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Dị iche iche mmetụta na ndabere music n'ihi na gị kwesịrị ncheta foto ngosi mmịfe.
Ga-esi otú ọtụtụ isiokwu dị iche iche na ndebiri maka NchNhr maka DVD eme zuru okè.
Edezi ngwaọrụ bụ maka n'iji ya gee ntị elu gị media faịlụ n'ihu na-ere ọkụ.
Dị iche iche DVD mmepụta formats dị. ie DVD diski, ISO faịlụ, wdg
3. Ashampoo-ere Ọkụ Studio 6 FREE
Ị na-jighị ọsọ maka ọzọ DVD na-ere ọkụ ngwa Windows DVD Onye kere; izute na ihe ịrịba ama nke mfe na oké kwadoro ngwa n'ihi na DVD-ere Ọkụ, Ashampoo-ere Ọkụ Studio 6 FREE. Ị nwere ike mfe ga-esi na ngwa ngwa na-eji ire ụtọ ọkụ CD, Blu-ray ma ọ bụ DVD na-ere ọkụ na a click site na nke a rụọ ọrụ nke ọma ma dị ike software. Gịnị mere ọ pụrụ ịbụ ihe ọzọ na-Windows DVD Maker-
Ọkụ gị CD, DVD na Blu-ray discs na ultrafast ọsọ.
Ọkụ gị mma diski formats maka ma mmepụta na ndenye discs.
Akpaka ọkụ ọsọ na ndị ọzọ na jụụ nhọrọ maka gị.
Media na Hardware nsogbu nchọpụta nsogbu nnyemaaka bụ na aka gị.
Ihichapu dị iche iche DVDs- CD-RWs / DVD-Ram / BD-nchapụta / DVD + RWs / DVD-RWs wdg
N'ime 1,700 DVD, CD na Blu-ray burners nwere ike inwe integrated nkwado.
PowerISO bụ otu n'ime zuru okè uzo ozo ka Windows DVD Onye kere na nwere ike ire DVD dị ka gị mkpa. Ọ kasị mma na faịlụ nhazi maka ISO faịlụ. Ị nwere ike nweta nkwado zuru ezu n'ihi na ị ISO na img diski faịlụ. Mere anyị na-ahọrọ PowerISO ka ọzọ Windows DVD Maker-
Akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ na CD / DVD / BD-ROM ie ISO, biini, NRG, CDI, DAA, wdg
Ike wepụ ISO faịlụ mgbe mmalite ya.
Nweta ọtụtụ ọkachamara burner isure CD, DVD, ma ọ bụ Blu-Ray diski.
Media formats nke ọtụtụ faịlụ formats na-akwado.
Ọ nwere ike na-ekwe ka ọkụ bootable discs na ọtụtụ ọrụ enyi na enyi interface.
Nero 2014 Platinum bụ zuru okè enyi gị nke mgbe ị nọ ná nsogbu na Windows DVD kere ya. Ị nwere ike nweta niile uru na ị chọrọ na-ere ọkụ DVD. The ọtụtụ nhọrọ na dị iche iche faịlụ ndakọrịta nwere ike dochie ojiji nke Windows DVD kere ya. N'ebe a, anyị nwere ike mfe na-ekwu na ihe mere Nero 2014 Platinum nwere ike ịbụ ọzọ ka Windows DVD kere ya.
Ọkụ gị mgbasa ozi faịlụ ọ bụla DVD formats.
A ogologo ndepụta nke na-akwado ọsọ ọsọ na faịlụ na-ere ọkụ.
Ị nwere ike nweta 1 Pịa tọghata na ọkụ discs maka ngwaọrụ ojiji.
Ọ na-akwado ndị mobile ngwaọrụ na TV gụgharia.
Easy na superfast DVD na-enwu.
> Resource> Windows> Download Windows DVD Onye kere Alternative maka Free